gရာမစက်ဘီးတံဆိပ်ကောင်းကောင်းလား - သုံးသပ်ချက်များ
အဓိက > သုံးသပ်ချက်များ > iantရာမဖြောင့်မတ်သောကုန်းနှီးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေခြင်း
iantရာမဖြောင့်မတ်သောကုန်းနှီးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေခြင်း
ဟုတ်တယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူ၏စက်ဘီး,iantရာစက်ဘီးများဖြစ်ကြသည်ကောင်းတယ်။Bရာစက်ဘီးအကြီးမားဆုံးအဖြစ်ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ, တစ် ဦး အဖြစ်လူသိများသည်အကောင်းဆုံးဘတ်ဂျက်ဆိုင်ကယ်အမှတ်တံဆိပ်။ ၎င်းသည်၎င်း၏တောင်နှင့်ဟိုက်ဘရစ်တွင်မြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရရှိသည်ဆိုင်ကယ်အမျိုးအစား။iantရာထို့အပြင်အဆင်ပြေစီးနင်းပေးခြင်းများအတွက်လူသိများသည်။
ငါသူ့ကိုကြည့်နေတာပဲ Oriole ပဲ။ - အိုးအနီရောင်အရာ? - ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ (mumble) အိုးထွက်သွားပါ လူတိုင်းငါ Mike Kazimer ပါ။
နှစ်စဉ် Pinkbike Field Trip အတွက် Arizona ရှိ Sedona တွင်ရှိသည်။ ကျနော်တို့တတ်နိုင်လမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်တစ် ဦး အကွာအဝေးကိုကြည့်ပါ။ ယခုအချိန်တွင်အာရုံသည် Giant Stance ကိုသာအာရုံစိုက်ရမည်။
Giant က Stance သည် singletrack ပျော်စရာအတွက်အကောင်းဆုံးသောနိဒါန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်ဘီးသည်ဒေါ်လာ ၁,၈၀၀ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချသောကြောင့်စက်ရုံအတွက်အလွန်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့် dropper ထိုင်ခုံများပါ ၀ င်သည်။ အပြည့်အဝရပ်ဆိုင်းမှုဆိုင်ကယ်။ ၂၉ လက်မဘီး၊ ၁၃၀ မီလီမီတာချိတ်နှင့် ၁၂၀ မီလီမီတာနောက်ဆုတ်ရပ်ဆိုင်းမှု။ ဒီစက်ဘီး၏ဂျီသြမေတြီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရွယ်အစားကြီးသောအတွက်အတော်လေးရှေးရိုးစွဲ ၄၅၄ မီလီမီတာလက်လှမ်းမီသည်။
စတီယာရင်ထောင့်သည် ၆၇.၅ ဒီဂရီတွင်မတ်စောက်သည်။ 75 ဒီဂရီထိုင်ခုံထောင့်နှင့်အတူ။
၄၃၈ မီလီမီတာစက်ဘီးဖြင့် Chainstays သည် enduro ကျော်ကြားမှုကိုရှာဖွေနေသောမြင်းစီးသူများအတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအားကစားအတွက်လေ့လာသူများအတွက်ပိုပြီးလုပ်; ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးစရာမလိုဘဲတောင်တက်ခြင်းအကြောင်းသိလိုသူတစ် ဦး ။ ဤစက်ဘီးသည် Giant ၏ Flex Point ဆိုင်းထိန်းစနစ်ဖြစ်သည်။
အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောပူးတွဲမောင်းနှင်ထားသောအဆစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ထိုင်ခုံတည်းခိုမှုသို့မဟုတ်ကွင်းဆက်ကြိုးများပေါ်တွင်မည်သည့်အရာကိုမျှရှာမတွေ့ပါ။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူမှုသည်ဤနေရာတွင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်မြင့်သောကမ်းလှမ်းမှုများကိုဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ဖြင့်သင်ရနိုင်သည့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့် Maestro ရပ်ဆိုင်းမှုပုံစံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သူတို့ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ငွေအနည်းငယ်သက်သာစေနိုင်မည်လော။ The Stance တွင်, သင်သည် SRAMRockShox Recon လမ်းဆုံလမ်းခွ၊ RockShox Monarch damper မှ SX 12-speed -Drive ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ Shimano သည် Maxxis Forecaster တာယာများရှိသည့်တာယာများအတွက်ဘရိတ်အုပ်လိုက်သည်။ The Stance သည်အလူမီနီယံဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းကေဘယ်ကြိုးများပါ ၀ င်သည်။ ရှေ့ဘောင်တြိဂံတွင်ရေပုလင်းတစ်လုံး၊ ကွင်းဆက်အစောင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ သင်လိုချင်လျှင် derailleur ကိုတောင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ISCG tab လမ်းညွှန်စနစ်ပုံစံမရှိပါ။ သင်သည်ဤ derailleur တောင်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
ကောင်းပြီနောက်ထပ်သေးငယ်တဲ့ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်တစ်ခုကစမ်းသပ်ဖို့အတွက်စက်ဘီးပေါ်လာသည်အထိငါတို့မသိခဲ့ဘူး။ ၎င်းသည်အမြန်လွှတ်ခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ အခုငါတို့မှာစမ်းသပ်မှုမှာစက်ဘီးရှစ်စီးရှိနေပြီ၊ ဒါက ၀ င်ရိုးရိုးအစားမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွှတ်လိုက်တာပဲ။
ဒီနေရာမှာလည်းကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းသက်သာပေမယ့်ကားမောင်းတဲ့အထင်အမြင်မှာဒီအကြောင်းကိုပိုပြီးပြောကြမယ်။ ဒါကအခြေခံပါပဲ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်တို့သည် Giant Stance ကိုစီးနင်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ (အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဂီတ) - အိုကေ၊ ငါတို့ကဒီiantရာမရပ်တည်မှုကိုအရီဇိုးနားပြည်နယ်၊ ဆီဒိုးနားတွင်စီးနင်းလိုက်ပါပြီ။ အနောက်ကာဇီးမားရှေ့ရှိ Recon လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်နောက်ဘက် ၁၃၀ မီလီမီတာ ၁၂၀၊ လေဖိအားဘယ်လောက်စီးပါသလဲ။ ပေါင် ၁၂၀ မှ ၁၃၀ ပေါင်ကဲ့သို့ပင် ၈၅ မှ ၁၀၀ မှ ၈၅ မှ ၁၀၀ အထိသာအကြံပြုသင့်သည်။
နောက်တစ်ခုကထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်၊ ထပ်မံ၍ 20 psi ထပ်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအထောက်အပံ့ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနောက်ဘက်တွင် b% အတွက် Sag, Tires, Tubeless Ready, 20 psi ထည့်ရမည်။ ထိုအဟုတ်, setup ကိုနောက်တဖန်တော်တော်လေးလွယ်ကူသည်။ (ပျော့ပျောင်းသောဂီတ) သင်မှန်မှန်တက်ကြည့်ကြပါစို့၊ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။ - ဒီစက်ဘီးကိုတက်တာဟာအဝေးသင်နိုင်ငံရဲ့ခံစားချက်ပိုများတယ် - 90s 90 လိုခံစားချက် - ဟုတ်တယ်၊ မင်းကရှေ့ကနေဖြောင့်မတ်တယ်၊ - ဒါကနည်းနည်းလိမ်တာ၊ မတ်စောက်တဲ့စတီယာရင်ထောင့်မဟုတ်ဘူး၊ စက်ဘီးမှာ 60 မီလီမီတာပင်စည်ရှိပြီးအနည်းငယ်ပိုစတီယာရင်။
များသောအားဖြင့်ငါတို့စီးသောစက်ဘီးစီးသူများမှာချောချောမွေ့မွေ့ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသည်။ သူတို့ကလျော့သွားလျှင် ပို၍ တိတ်ဆိတ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ နံပါတ်များအားလုံးအတူတကွကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေလျှင်သင်မဟုတ်ပါ။ ဤနေရာတွင်အားဖြင့်ကြီးကြီးမားမားလွယ်ကူသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်သတိရပါ, ငါတို့တတ်နိုင်စက်ဘီးအာရုံစိုက်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က 35 ပေါင် mark.four တ ဦး တည်းထူးခြားမှုစေသည်တွန်းကြောင်းဒီမှာစက်ဘီးအချို့ရှိသည်။
ဒီတော့ဒီစက်ဘီးကပိုပေါ့ပြီးပိုမြန်တဲ့တာယာတွေလည်းရှိတယ်။ နည်းနည်းလေးအားစိုက်ထုတ်ပြီးတောင်ထိပ်ကိုရောက်အောင်ကူညီပေးတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ မင်းကရိုးရာနိုင်ငံဖြတ်ကူးသူဆိုရင်တော့မင်းကအသံကျယ်လွန်းလို့မစီးဘူး၊ မင်းကကြမ်းပြင်တောင်တက်တာတွေလုပ်ချင်တယ်။ ဒီလိုမျိုး - ဟုတ်ကဲ့ - သေချာပါတယ်။ (တင့်တယ်သောဂီတ) အိုကေ၊ ဒါဆိုတောင်ထိပ်ကိုရောက်တော့ပြန်ဆင်းရမယ်။
ပြီးတော့ဒီဇာတ်လမ်းကအဆိုးဆုံးအတွက်အလှည့်ကိုရောက်နေတယ်၊ ​​ဟုတ်တယ်၊ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်၊ အပေါ်ကဆင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာအတွေ့အကြုံပဲ။ သင့်မှာအနိမ့်ဆုံးတာယာတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်တာယာတွေကသူတို့နဲ့အတူသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဘောင်ကိုယ်နှိုက်၊ ဂျီသြမေတြီနှင့်တင်းကျပ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ - ပဲ့ပဲ့သည်ငါအလျင်အမြန်ထုတ်လွှတ်သောပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုခံစားမိသည်။
သင်အမှန်တကယ်ရောက်လာသောအခါသင်အမှန်တကယ်ကြမ်းတမ်း။ မြန်ဆန်သောအရာများသို့ရောက်သောအခါ။ စက်ဘီးကဒီလိုလုပ်တာနဲ့တူတယ်၊ ရှေ့ကနေနောက်ကချိတ်ဆက်တာမျိုးမခံစားရဘူး။ ဒီဟာကတိုတိုခရီးသွားလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်
၎င်းသည်အလွန်ကျယ်လောင်သောမည်သည့်အရာအတွက်မျှမရည်ရွယ်ပါ။ - ဟုတ်ကဲ့၊ စက်ဘီးပေါ်မှာထိုင်ရတာကအမှားအတွက်နည်းနည်းပိုများတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းကောင်းတယ်။ သင်ဤတစ်ခုနှင့်အတူရှိနေရန်ရှိသည်။
တကယ်လို့မင်းကအရမ်းညှစ်လိုက်ရင်မင်းကိုသိလိမ့်မယ်၊ ဟေ့ဒါပေမယ့်မင်းလုပ်နိုင်မှာလား။ နောက်ဘီးကိုအလျင်အမြန်ထုတ်ပါ။ သင်၏သုံးဆအတွက် derailleur mount ရှိသည်။ သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွင် Giant super ကိုရိုက်ကူးရန်မကြိုးစားပါ။
ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ frame ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်၊ ၆၊ ၇ နှစ်လောက်လုပ်သလိုခံစားရတယ်။ ဒီနေရာမှာအခြားရွေးချယ်စရာတွေ၊ ဂျီသြမေတြီနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးတို့လိုခေတ်မမီတော့ဘူး။ - ဟုတ်တယ်၊ ခေတ်နောက်ကျသွားပြီ ထိုအကြောင်းကစိတ်ပျက်စရာပါပဲ။
ကြီးမားသောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သော Giants သည်စျေးကွက်တွင်အကြီးမားဆုံးသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးခေတ်မီဂျီသြမေတြီနှင့်ဆိုင်သောစက်ဘီးကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာထုတ်လုပ်ရန်အရင်းအမြစ်အားလုံးရှိသည်။ ဒါကစက္ကူပေါ်ကစက်ဘီးတစ်စီးပါ။ ဒီစျေးနှုန်းကကြီးတယ်။ ပြီးတော့အားကစားကိုလူတွေများများရလေလေ၊
ဒါပေမယ့်ဒီစက်ဘီးကိုတကယ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျိန်းသေငါဆိုလိုတာကငါဒေါ်လာ ၁၄၀၀ တန် Bossnutis ဟာပိုပြီးသေးငယ်တဲ့စက်ဘီးစီးတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါကဘောင်ပေါ်မူတည်တယ်ဆိုတာငါပြောဖို့တောင်သေချာသွားမယ်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဂျီသြမေတြီကိုအသုံးပြုသောခိုင်မာသောဘောင်သည် - အတိအကျ - ဟုတ်ပါသည်။ (ပျော်ရွှင်သောဂီတ) - ဒီမှာကရယ်စရာကောင်းတာကငါတို့ဒီမှာထိုင်ပြီး Kazimer ပြေးပွဲမှာ Giant အကြောင်းပြောနေတာအကြောင်းငါတို့ပြောကြတယ်။
ငါဆင်းသက်အပေါ်ငါ့အမြန်ဆုံးအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ဒီဆင်းကအရမ်းမကျယ်ဘူး၊ စက်ဘီးစီးတာကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အပေါ်ထပ်သည်ဤအရာနှင့်အကြမ်းအားဖြင့်အမြန်ဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ - သို့သော်ထိုအချိန်ကိုချသောအခါသင်မည်မျှလုံခြုံမှုရှိသနည်း။ - ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်သည်အခြားလမ်းကြောင်းများ၊ ပို၍ ခက်ခဲသောအရာများ၊ အလွန်ခက်ခဲသောအရာများ၊ လျင်မြန်စွာစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်အလွန်တိုတောင်းသောအကွာအဝေးဖြတ်ကျော်စက်ဘီးစီးခြင်းကိုသာစီးနင်းလေ့ရှိပြီးထိုအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်အဆင်ပြေသည်မဟုတ်ပါ။ - ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်ဒီစက်ဘီးပေါ်မှာဒုတိယအမြန်ဆုံးအချိန်ကိုစီးခဲ့တယ်၊ တောင်တက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမကြာခဏကြုံခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ရှစ်ယောက်မြောက်ထဲကခုနစ်ခုမြောက်ဟာအလွယ်တကူဆင်းနိုင်ဖို့အတွက်အနှေးဆုံးဖြစ်တယ်။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲစက်ဘီးကစက်ဘီးကိုနောက်ကထားလိုက်တယ်။ (Joy Music) ဒေါ်လာ ၁,၈၀၀ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ဒီစက်ဘီးကိုကြည့်ပြီးထိုအစိတ်အပိုင်းများကိုအနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစေသည်။ မင်းအကြိုက်ဆုံးကဘာလဲ ဒီတစ်ခုပေါ်တွင်အစိတ်အပိုင်း? - ဒါကခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (ရယ်တယ်) - ငါလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒီအဆက်အသွယ်နေရာမှာထိုင်ခုံနေရာလီဗာပါ။
တကယ်ကောင်းပါတယ် - ဤဒေါ်လာ ၁,၈၀၀ ဆိုင်ကယ်တွင်သင်အကြိုက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှာထိုင်ခုံခုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ - ဟုတ်တယ်။ - ဒါငါတို့ပါပဲ။ - ငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကနည်းနည်းလေးကောင်းတယ်၊ ကောင်းပါတယ်။
ငါကငါ့အကြိုက်ဆုံးလို့ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစက်ဘီးတွေအားလုံးကိုကျွန်မတို့ကောင်းစွာမအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ထူးဆန်းသော chunky lever များရှိသည်။ ဤစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းဖြင့်စက်ဘီးပေါ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတင်ထားသည့်အလုပ်ကိုကြည့်ရသည်မှာကောင်းမွန်သော်လည်းအခြားအစိတ်အပိုင်းများမှာအထင်ကြီးစရာမရှိပါ။ - နံပါတ် ၁ သည်ဘရိတ်ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ဒါတွေက Shimano နှစ်ခုပါistonလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်ဘရိတ်၊ ဗဓေလသစ်ချပ်ပြားများ၊ ဗဓေလသစ်စုပ်စက်များ၊ ကန ဦး ကိုက်ခြင်းကိုသုညအပိတ်မှသာအလှည့်အပိတ်လုပ်ခြင်း၊ ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းသာမဟုတ်၊ ကန ဦး ကိုက်ရုံလောက်နှင့်မလောက်ဘူး၊ ဤလက်မောင်းများသည်လက်ချောင်းသုံးချောင်းအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျနီးပါးလက်ချောင်းသုံးခုသုံးစွဲဖို့ရှိသည်။ ၎င်းသည် Shimano ပြုလုပ်သောစက်ဘီးစီးသည့်အနိမ့်ဆုံးတောင်စက်ဘီးစီးသည့်စက်ဘီးဘရိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရောင်းဈေးကအရမ်းနိမ့်တယ် သင်ဤစက်ဘီး၏အကြောင်းရင်းကိုသိပေမယ့်တောင်တက်စက်ဘီးစီးတဲ့အခါမှာဘရိတ်ကောင်းများရရှိခြင်းကကောင်းပါတယ်။ ငါဒီ Recon fork အကြောင်းနည်းနည်းလောက်ပြောခဲ့သေးတယ်၊ ငါတို့ကဆက်ပြောနေတယ်၊ ​​မင်းကလေကိုဖိအားတွေအများကြီးပေးရမယ်၊ အဲဒါကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ခံစားမှုဖြစ်စေတယ်၊ ​​အနည်းဆုံးတော့ခရီးသွားလာရေးကိုပိုမြင့်စေတယ်။ သငျသညျထပိုက်ဖြစ်သည့်အခါကဲ့သို့, သငျသညျခြားနားချက်ကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သင်မူကား, Reconis နှင့်အတူစတင်ရုံမြင်းစီးသူရဲကိုအသစ်ဖြစ်လျှင်ကြောက်မက်ဘွယ်သောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေငါ $ 1,800 များအတွက်ဆိုလိုတာကဒါဟာစက်ဘီးအတွက်တရားမျှတပေမယ်သင်ရှိသည် Fork ကို overprint လုပ်ရန်၊ အလုပ်လုပ်ရန်ဤ dial up အပေါ်မြန်နိမ့်သောမြန်နှုန်းချုံ့မှုကိုသုံးပါ။
မင်းအတွက်လုံလောက်တယ်။ Yah, တာယာတွေထိမှန်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ Maxxis Forecasters သည်တာယာများဖြစ်ပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှိမ့်သောဤစက်ဘီးအတွက်ပြုလုပ်သည်။
သငျသညျပိုနည်း traction ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာ meatier တာယာကိုဝတ်ဆင်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားဖို့သူတို့ဟာ Sedona မှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်။ ခက်တာကအထုပ်အပိုးတွေပါတဲ့၊ သူတို့ကတော်တော်လေးကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ရတယ်၊ သငျသညျiantရာရပ်တည်ချက်။ မင်းဘာ frame ကို upgrade လုပ်မလဲ။ - ဟုတ်တယ်၊ ဒါကစိတ်ပျက်စရာပါ။ ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးသည်စတင်ရန်အလွန်ကောင်းသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးတွင်အပို ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုနှင့်အတူ၎င်းတို့သည်အလွန်အသုံးဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဆွဲထားရန်ကောင်းသောအစိုင်အခဲကိုယ်ထည်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီစက်ဘီးကရိုးတံမရှိပါ။ သင်အဲဒီလိုလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူး။ ဂျီသြမေတြီကိုလည်း ပြောင်းလဲ၍ မရပါ; မင်းကစက်ဘီးကိုမဆွဲနိုင်ဘူး၊ ဒီလိုမျိုးဘာမှလုပ်လို့မရဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာပိုပြီးရန်လိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေစီးပြီးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာလမ်းကြောင်းမြင်းစီးသူရဲတွေအများကြီးရှိတယ်၊ တစ်နှစ်နှစ်နှစ်။
ငါစတင်တာပါ - ဟုတ်တယ်၊ သင်တစ် ဦး အစပြုသူအားကစားသို့ဆောင်ခဲ့နိုင်လျှင်, ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့နေရာပိုပေးသည်။ (upbe ဂီတ) - အိုကေ Kazimer, ငါကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုမည်သို့စဉ်းစားရမည်ကိုငါသိ၏။ ခင်ဗျားဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာပြောပြပါ ဦး ။
သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ အဲဒီမှာရှိတဲ့အလားအလာတွေကစျေးနှုန်းကိုကြိုက်တယ်၊ စာရွက်ပေါ်မှာလျောက်ပတ်စွာတပ်ဆင်ထားပုံရတယ်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိစေရန်ခေတ်မီရုံနှင့်မလုံလောက်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်သာမာန်မောင်းနှင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်ငွေများစွာမသုံးချင်ပါ၊ သငျသညျဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာပိုပြီးအမှုအရာလုပ်နေတက်အဆုံးသတ်သည့်အခါ။
ဒါကမင်းအတွက်စက်ဘီးမဟုတ်ပါဘူး။ အတိအကျ၊ ဒါကiantရာမရပ်တည်ချက်ပဲ။ Pinkbikes Field Trip မှစက်ဘီးများများထပ်မံညှိနှိုင်းပါ။ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအပါအ ၀ င်ဤစက်ဘီးအားလုံး၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသည်။ (တေးဂီတ)
Theအကောင်းဆုံးကုန်းနှီးFabric Scoop Race ကိုဘာရွေးရမလဲဆိုတာမသေချာရင်
Theအကောင်းဆုံးကုန်းနှီးhead-down ပြိုင်ကားသမားများနှင့်အချိန် triallists အထူးပါဝါကျွမ်းကျင်သူသည်။
အများဆုံးစွယ်စုံနှင့် Ergonomicsကုန်းနှီးErgon SR Comp ။
Theအကောင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ကုန်းနှီးရူပဗေဒ Aliante R1 ။
သင်သည်သိမ်မွေ့သောဖြစ်နိုင်ချေအသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်လိုသည်။ ဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းအရင်းမှာသင်၏လက်ရှိသိမ်မွေ့မှုသည်သင့်အတွက်သိပ်အဆင်မပြေသော်လည်း၊ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒါကတော်တော်လေးအသုံးများတဲ့အရာဖြစ်ပြီးမတူညီသောရွေးချယ်စရာများ၊ ကကုန်းနှီးမှကြွလာသောအခါ, ဒီအမှုဖြစ်သော်လည်းပေမယ့်? ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အရမ်းရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့ကုန်းနှီးအကြားခြားနားချက်နဲ့မင်းတို့မျှော်လင့်နိုင်မယ့်အရာတစ်ခုကိုဘယ်လိုရွေးချယ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့သွားမယ်။ ပထမဆောင်းပါး။ ဘာကြောင့်လဲ စက်ဘီးပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူတွေကမတူညီတဲ့ကုန်းနှီးကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ သင့်အလေးချိန်သည်သင်၏ ischial tuberosity ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အာရုံကြောမဟုတ်သောခြေထောက်တွင်လူသိများသည်။ သင်၏အရိုးများသည်အရွယ်အစားနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးထောင့်ပေါ်တွင်မတူညီသောမြင်းစီးသူရဲများ၊ စက်ဘီးပေါ်တွင်ထိုင်ခြင်းနှင့် SOL ဂျီသြမေတြီပေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားစွာနေရာချခြင်း၊ သင့်စက်ဘီး၏တည်ဆောက်ပုံတွင်အမျိုးသားများအတွက်သီးသန့်ကုန်းနှီးများ၊ အမျိုးသမီးများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောကုန်းနှီးများနှင့်အခြားအရာများစွာရှိသည် Adils သင် padding များစွာနှင့်မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသည့် unisex အရွယ်ကျယ်ပြန့်သောကုန်းနှီးများစာရင်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်အပန်းဖြေရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး City bikes သည်ခရီးရှည်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူတို့ကသူတို့ကိုအခင်းနှင့်အတူထည်ဘောင်းဘီတိုမဝတ်ကြဘူးဘယ်မှာနှင့်သင်၏ထိုင်အရိုးအပေါ်ပိုပြီးဖိအားပေးသောစက်ဘီးပေါ်မှာပိုပြီးဖြောင့်မတ်ထိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ပိုမိုကျယ်ပြန် padded ကုန်းနှီးမကြာခဏဤအထူးစက်ဘီးအမျိုးအစားများအတွက်အလွန်ပိုနှစ်သက်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ပြိုင်ကားမောင်းသောကုန်းနှီးအနေဖြင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရန်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ပြိုင်ဆိုင်သောစက်ဘီး၏ဂျီသြမေတြီကြောင့်သင်က၎င်းကိုမတူကွဲပြားသောထောင့်တွင်ထိုင်။ ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်၊ နောက်ကျောပါသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်အပေါ်ဖိအားလျော့နည်းသင့်ထိုင်နေသောအရိုးများကိုပိတ်ထားသည်။
သူတို့ကအစကောင်းတဲ့ထိုင်ခုံ pad ပါတဲ့ padded တိုတိုနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ gcn ဆိုင်တွင်နှစ်သိမ့်မှုရရှိသော GCN Castelli ၏သက်တောင့်သက်သာမှုကိုအဓိကအားဖြင့်ကုန်းနှီးပုံသဏ္byာန်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်၊ သိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏမှာမသတ်မှတ်ထားခြင်းကအသိအမှတ်ပြုရန်အရေးကြီးသည်ကုန်းနှီးအမှတ်တံဆိပ်များသည်သင်စက်ဘီးပေါ်တွင်ထိုင်ပုံပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောကုန်းနှီးပုံစံများကိုပြုလုပ်သည်။ သင်၏နောက်ကျော၏ထောင့်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏တင်ပါးဆုံရိုးနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်း၏ထောင့်ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ထိုင်အရိုးများရှိဖိအားဖြန့်ဖြူးမှုကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ယခုအချက် I ကိုဖော်ပြရန်ခန္ဓာကိုယ်ကုန်းနှီးအချို့ကိုပြသသည့်ပျော့တစ်သျှူးသို့မဟုတ်အိပ်ရာလည်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ရုပ်သံလိုင်းကသူတို့ကိုကမကထသောကြောင့် physique စဉ်းစားနေပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါပြောတယ်ငါသည်လည်းသင်၏အကွာအဝေးရှိအခြားသိမ်မွေ့အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်, ဒါကြောင့်အကွာအဝေးအတွင်းပထမ ဦး ဆုံးအရာကွဲပြားခြားနားသောသိမ်မွေ့သော profile များကိုဖြစ်ပါသည်, ဥပမာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Arionith ပုရွက်ဆိတ် macaws ရှိပါတယ်။ သင်မည်မျှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏ခြေချောင်းများကိုတို့ထိနိုင်လျှင်သင့်တွင်တင်ပါးဆုံရိုးထောင့်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုပါးလွှာသောအသံအတွက်ပိုမိုကြာရှည်မည်ဟုပြောလိမ့်မည်။ အန္တာရာနာမှတစ်ဆင့် Allyaunty သိမ်မွေ့သောလမ်းတစ်လျှောက်ရှိသော်လည်းသင်လည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နည်းလျှင်သင်သည်အမှိုက်သရိုက်စက်ဘီးစီးသူဟုမဆိုလိုပါ။ ပီတာဆာက Ali-အန်တီမော်ဒယ်ကိုပိုနှစ်သက်သည်။ ငါဆိုလိုသည်မှာသူစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်မှာမတူညီသောပရိုဖိုင်းများအရသူသည်လူသစ်အဖြစ်တော်တော်လေးကောင်းသောသူဖြစ်သည်။
သငျသညျအများအားဖြင့်တူညီသောကုန်းနှီးမော်ဒယ်၌ပုံမှန်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောရနိုင်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်သေးငယ်သောသာမန်နှင့်ကြီးသောတံဆိပ်များကိုပေးသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာအရိုးအကျယ်ထိုင်ခြင်းသည်ကွဲပြား။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြည့်နိုင်သည်၊ ပိုမိုကျယ်ပြန်ထိုင်သည့်အရိုးများရှိသူများကပိုမိုကျယ်ပြန်သောကုန်းနှီးထားခြင်းက၎င်းတို့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
သင့်ထိုင်နေသောအရိုးများကိုတိုင်းတာရန်အတွက်သင်ဟာများသောအားဖြင့်သင်၏စက်ဘီးဆိုင်သို့သွားပြီးအထူးပြုလုပ်ထားသောစက်များရှိသည့်နေရာတွင်ပြီးပြည့်စုံသောကုန်းနှီးကိုသင်နည်းနည်းပါးပါးကျဉ်းမြောင်းစေရန်နှင့်သင်မလှုပ်ရှားမီသင်အား ဦး တည်ရာကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ နောက်ကျောတွင်ကျယ်ပြန့်သောထိုင်ခုံအရိုးများကပိုကြီးမားသောတင်းတုံးနှင့်အမြဲတမ်းတူညီမှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်သင်၌ကြီးမားသောတင်းပါးတစ်ခုနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောထိုင်နေသောအရိုးများနှင့်အပြန်အလှန်ရှိနိုင်သည်။ နောက်တစ်ခုက cutouts တွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာက cutout ပါတဲ့ကုန်းနှီးတစ်ခုပါ။ အခြေခံအားဖြင့်အလယ်အလတ်အပေါက်တစ်ခုပါ။ ဒါကသင့်ရဲ့ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးများအပေါ်ဖိအားကိုသက်သာစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အချို့လူများကလုံးဝကျိန်ဆိုကြသည်။ လည်ပင်းမရှိသောခိုင်မာသောကုန်းနှီးဖြင့်သင်အိမ်တစ်ဝက်သို့လည်းသွားနိုင်သည်။ ဤသည်မှာကယ်ဆယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာဤကုန်းနှီးသည်ဖြတ်သန်းခြင်းနှင့် ဆက်စပ်၍ သင်၏ထိုင်နေသောအရိုးများကိုတိုင်းတာသည်။ သင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေသည်ဟုခံစားရလျှင်၎င်းသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အတွက်လည်ပင်းကိုစဉ်းစားခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့အချို့သောသူများသည်လည်ပင်းများကိုမတူညီသောပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးတို့၌ရရှိနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုလုံးဝကျိန်ဆိုကြသည်။ လာမယ့်ကုန်းနှီးအမျိုးအစားပေါ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောလူများက cisalized တိုတောင်းတဲ့နှာခေါင်းကုန်းနှီးကြောင်းဖော်ပြသည် aphsique argo ယခုသူတို့၏အထူးတပ်ဖွဲ့သိမ်မွေ့နှင့်အတူကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပထမ ဦး ဆုံးခဲ့, ယခုငါပုံမှန်အရှည်၏သိမ်မွေ့သောတ ဦး တည်းဘေးတွင်ထားလျှင်သင်တွေ့နိုင်ပါသည် tha tha t နည်းနည်းလေးတိုတယ်၊ ဒါကြောင့်အချိန်ကာလနဲ့ Triathlon ကုန်းနှီးနဲ့ဆင်တူတယ်။ အတွေးကနှာခေါင်းမတိုတာကပိုပြီးလှည့်တဲ့တင်ပါးဆုံနဲ့ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့သင့်ရဲ့တင်ပါးဆုံရိုးကိုဖွင့်ပြီးတော့သင့်ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးကိုကျုံ့နိုင်လိမ့်မယ်။ ကြွက်သားအုပ်စုများသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာဖြင့်မီးခိုးရောင်ဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော buttock activation ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်သင့်အားငါပြောမည်မှာအချိန်ကာလစမ်းသပ်မှုနှင့် Triathlon ၏တိကျသောလွန်းပျံယာဉ်များသည်နည်းနည်းထူးဆန်းပုံရပြီး TT ဆိုင်ကယ်စီးရန်အလွန်ပြင်းထန်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားလိုအပ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သမျှလေခွင်းအားဖြင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်တကယ့်ရန်လိုသည့် Aero အနေအထားတစ်ခုတွင်စီးပါကသင်၏ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးများနှင့်သင့်အလေးချိန်ကိုများစွာဖိအားပေးနိုင်သည်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်သင်၏ဆီးခုံမို့မို့အရိုးသို့၎င်းဖိအားကိုသက်သာစေရန်မကြာခဏပြောင်းလေ့ရှိသည်။ ကုန်းနှီး၏ရှေ့ပိုင်းတွင်ထိထိရောက်ရောက်ဖယ်ထားခြင်းခံရသည်။ ထို့ကြောင့်ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံကို Mystica သည်သူ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ nosepiece len ပျောက်နေသည်။
နောက်မှငါကုန်းနှီးများဘာလုပ်သည်၊ ဘာကိုဆိုလိုသည်၊ စက်ဘီးအပိုပစ္စည်းမည်မျှ ပို၍ ထူးခြားသည်ကိုပိုမိုပေါ့ပါးသည့်ပစ္စည်းမှထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုသင်မည်မျှသုံးစွဲသည်ကိုဆွေးနွေးပါမည်။ စကားမစပ်, သင်စက်ဘီးပေါ်ကိုယ်အလေးချိန်ချင်လျှင်, ကုန်းနှီးကလုပ်ဖို့စျေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘီးအစုံ (သို့) frame ကုန်းနှီးတွေပေါ်မှာဂရမ်ရာဂဏန်းလောက်ဟာအောက်အဆင့်မှာဈေးအသက်သာဆုံးနဲ့အလေးဆံဆုံးနဲ့ထိပ်ဆုံးမှာစျေးအသက်သာဆုံးနဲ့အပေါ့ပါးဆုံးအဆင့်ဆင့်ကိုဆင့်ကဲဆင့်ကဲဖြစ်လာတယ်။
သတင်းကောင်းကအဆင့်ဆင့်အတွင်းမည်သည့်ကုန်းနှီးကိုဝယ်သည်၊ အရေးမကြီးသောကုန်းနှီး၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်ပုံသဏ္,ာန်သည်ပုံစံအတိုင်းအတူတူပင်ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့်ဥပမာတစ်ခုမှာ Physiquearioni ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးကုန်းနှီးဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ ဤ ၀ င်ရိုးကုန်းရိုးသည်သံမဏိရထားများနှင့်ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်များတပ်ဆင်ထားသည့်ကျွန်ုပ်၏စက်ဘီးအားလုံးပေါ်တွင်ထိုင်နေသည်။ ထို့နောက်သင်သည်မန်းဂနိစ်ရထားလမ်းထဲသို့ဝင်နိုင်ပြီးကင်အော်တီတန်ရထားထက်အနည်းငယ်ပေါ့သည်။ အနည်းငယ်ပိုပေါ့သည်သင်အနည်းငယ်ပိုအလေးချိန်ချွေတာနိုင်သည့်ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်၏ထိပ်တွင်ကာဗွန်အက်တမ်ကိုရရှိနိုင်သည်၊ ထို့နောက်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အလွန်ပေါ့ပါးသောဤကဲ့သို့သောကခုန်ခြင်းစိတ်ကူးယဉ်ဘောင်းဘီကိုသင်သွားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ယေဘူယျအားဖြင့် silhouette၊ ကုန်းနှီးပုံသဏ္andာန်နှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုတို့သည်အတူတူပါပဲ၊ သို့သော်သင်သည်သင်၏ကုန်းနှီးပေါ်တွင်များစွာသိမ်းဆည်းထားလိုပါက၊ သို့သော်ယခုသင်လုပ်နိုင်သည်။ အဲဒီမယုံနိုင်လောက်တဲ့ 3D ပုံနှိပ်ကွက်ပါ ထိပ်ဆုံးက padding ကဆိုလိုတာကမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးပြီးကြည့်ရတာစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပြီးစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။ သို့သော်ယခု yetsaddle အမှတ်တံဆိပ်များသည်ယခုထိပ်တန်း shuttle ၏လမ်းကြောင်းအဖြစ် 3D ပုံနှိပ်ကွက်ပါသည့်ဖန်စီဘောင်းဘီများပေါ်တွင်တင်ထားသည်။ သို့သော်ပရိုဖိုင်းမှာမူမပြောင်းလဲဘဲရှိနေသည်။ ဒီထက်ပိုပြီးစျေးပေါတဲ့ 3D ပုံနှိပ်ကွက်မရှိဘူး။ သို့သော်သင်အမှန်တကယ်တောက်ပသောပေါ့ပါးသောကုန်းနှီးကိုကာဗွန်သံလမ်းများနှင့်လိုချင်ပါကကာဗွန်သံမဏိများမှာ၎င်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ ထိုင်ခုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောခလုတ်များအားလုံးသည်ဘဲဥပုံရထားနှင့်မကိုက်ညီပါ။ သတ္တုရထားများပြောင်းရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကုန်းနှီးကိုဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာသတိထားပါ။ သင်၏အကြံပေးချက်သည်သင်၏ဆိုင်ကယ်ဆိုင်သို့သွားရန်ဖြစ်သည်။
စတိုးဆိုင်အတော်များများသည်စမ်းသပ်မှုစီးနင်းခြင်းနှင့်သင်မည်သို့ကိုင်တွယ်သည်ကိုကြည့်ရှုခြင်းကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရောင်အသွေးစုံသည့်အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်စမ်းသပ်ထားသည့်ကုန်းနှီးများသယ်ဆောင်ကြသည်။ သင်၏ပုံသဏ္showာန်ကိုပြသရန် Barometer လည်းရှိသည်။ သင်၏ပုံသဏ္buttာန်နှင့်အကျယ်ကိုတိုင်းတာပါ။ သူတို့အရောင်းဆိုင်များတွင်ကွဲပြားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၌အမျိုးမျိုးသောတိုင်းတာခြင်းစနစ်များရှိသောကြောင့်အရိုးထိုင်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်ရောင်းချသူ Italia သည် ၄ ​​င်း၏ Body Geometrybarometer စနစ်နှင့်အခြားမည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များရှိပါသလဲ။ သင်ဤဆောင်းပါးသည်အသုံး ၀ င်သည်ဟုသင်တွေ့ရှိခဲ့သောအကောင်းဆုံး fit မျှော်လင့်ချက်နှင့်နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုသင်ရွေးချယ်သောသိမ်မွေ့စွာထိုင်သည့်အခါဖိအားသည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုအမှန်တကယ်တွေ့နိုင်သောဤဖန်စီဖိအားမြေပုံစနစ်များကိုပင်ရယူပါ။ ငါတကယ်သတိထားသင့်တာကပြိုင်ကားဆိုင်ကယ်ကုန်းနှီးဟာဘယ်တော့မှထိုင်ခုံဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အမှန်ကန်သောကုန်းနှီးကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်, သင်အားဖြင့်အဘယ်သို့သွားနှင့်သင်ကကိုက်ညီသောကုန်းနှီးရှာဖွေတာကံကောင်းပါစေနှင့်သင်ကသင်၏ကုန်းနှီးနှင့်အတူအဆင်ပြေမယ့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ pair တစုံကို padded ဘောင်းဘီတိုကိုရှာဖွေနေလျှင်, မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ gcn ဆိုင်သို့၊ ငါတို့မှာယောက်ျားနှင့်မိန်းမတွေအတွက်အမျိုးမျိုးသောအတိုချုပ်ဘောင်းဘီတိုအမျိုးမျိုးရှိပြီးနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ ဦး မယ်
Selle Italia သည်ကောင်းမွန်စွာကိုယ်စားပြုသည်ဘို့peloton ။ Team Dimension Data ၏ဗြိတိသျှလူမျိုးမြင်းစီးသူရဲ Steve Cummings သည်ကာဗွန်၊ ကြွေထည်များနှင့်နှစ်ဆသိပ်သည်းသောတွဲဖက်မှုဖြင့် Novus Boost Kit Carbonio Superflow ကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Selle Italia Novus Boost Superflow ကိုဖတ်ပါကုန်းနှီးပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ဆယ့်ငါး 2019 ။
ဒါကြောင့် Palatal ရှိစပွန်ဆာများနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အပြိုင်အဆိုင်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် UCI World Tour အသင်း ၁၈ သင်းကိုကြည့်ပြီး ၂၀၁၈ ရာသီအတွက်မည်သည့်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ ထို့ကြောင့် Shimano သည်အောက်ပါအသင်းများ၏စက်ဘီးများပေါ်တွင် AG2R LA MONDIALE၊ ASTANA PRO TEAM၊ BAHRAIN MERIDA၊ BMC RACING TEAM၊ BORA HANSGROHETEAM DIMENSION DATA၊ TEF EF EDUCATION FIRST, FDJ၊ TEAM LOTTO NL-JUMBO, MITCHELTON ကြမ်းပြင်များ၊ TEAM SKY၊ TEAM SUNWEB GIANT နှင့် SEGAFREDO ကိုအနည်းဆုံး၎င်းတို့၏လီဗာများနှင့်ဂီယာများတပ်ဆင်ထားသည်။ ဒါကအသင်း ၁၈ သင်းထဲက ၁၄ ခုပါ။
ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးဂီယာအုံရွေးချယ်မှုမှာ Campagnolo နှင့်စူပါစံနှုန်း EPS လီဗာများနှင့်ဂီယာများဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အသုံးပြုသောအသင်းများမှာ LOTTO-SOUDAL၊ MOVISTAR TEAM နှင့် UAE TEAM EMIRATES များသာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းသာကျန်တော့သလော။ မရဘူးဆိုရင်ကောင်းပြီ၊ မင်းကိုငါပေးမယ် ဒါဟာ KATUSHA-ALPECIN အဖွဲ့ပါ။
သူတို့သည် Sram Red eTap lever နှင့် gears များကိုအသုံးပြုနေကြသည်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာနှစ်သောင်းချီ။ ကီလိုမီတာထောင်ပေါင်းများစွာမောင်းနှင်သောကျွမ်းကျင်သောမြင်းစီးသူရဲအတွက်ကုန်းနှီး၊ အလွန်အရေးကြီးသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကောင်းသောရွေးချယ်မှုများသည်ရာသီတစ်ခုပျက်စီးနိုင်သည်။
ဒီတော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ဒီတော့ fi'zi:,, သင် MOVISTAR TEAM, TEAM SKY, TEAM LOTTO NL-JUMBO, AG2R LA MONDIALE နှင့်နောက်ဆုံးတွင် BMC RACING TEAM ရဲ့ 2018 ခုနှစ်အဘို့သင့်ကုန်းနှီးကိုအသုံးပြု။ ငါးအသင်းများကိုရှိသည်။
Prologo မှာမင်းမှာအဖွဲ့ ၅ ဖွဲ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် fi'zi သငျ့လျြော; ။ ။ ဒါက FDJ၊ TEAM EF EDUCATION FIRST, BAHRAIN MERIDA, ASTANA နှင့် VAE TEAM EMIRATES ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အထူးပြုနှင့် Selle Italia သူတို့မှာတစ်ခုစီမှာကုန်းနှီးကိုသုံးတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။ အထူးပြုများအတွက်ပထမ ဦး ဆုံး BORA-HANSGROHEUND QUICK- အဆင့်ကြမ်းပြင်များဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ Selle Italia အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ LOTTO-SOUDALand TEAM KATUSHA -ALPECIN ရှိတယ်။
အောက်ပါအမှတ်တံဆိပ်များကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းတွင်သာကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် TREK SEGAFREDO တွင် Bontrager ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့မှာ TEAM SUBWEB Iရာမအပေါ်haveရာမရှိသည်။
စမတ်ကုန်းနှီးကို TEAM DIMENSION DATA မှအဖွဲ့ကပြုလုပ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ MITCHELTON-SCOTT၊ ခင်ဗျားက Syncros ကုန်းနှီးပေါ်မှာထိုင်နေတာပဲ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်လျှပ်စစ်မီတာများကိုကြည့်ကြစို့။
ဟုတ်ကဲ့၊ စက်ဘီးတိုင်းလိုလိုမှာဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။ သူတို့ကအဲဒါကိုမသုံးကြဘူး၊ ကြည့်ရအောင်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဤစျေးကွက်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်စက်ဘီးပေါ်တွင်သူတို့တွေ့ခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောစွမ်းအင်မီတာများမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားပြီ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တွေကဈေးကွက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။
2018 အတွက်အသင်းလေးခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် AG2R LA MONDIALE, BAHRAIN MERIDA, LOTTO-SOUDAL AND TEAM EF EDUCATION FIRST ။ Shimano သည် R9100P ပါဝါမီတာကို ၂၀၁၇ တွင်ပြသခဲ့သည်။
ထို့အပြင်သူတို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက်မီတာအများစုကိုလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အောက်ပါအသင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ BMC RACING, FDJ, TREK SEGAFREDO, TEAM SUNWEB GIANT AND FINAL MITCHELTON-SCOTT ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့စက်ဘီးသုံးစီးတွင်ရှိနေသည်။ tour ည့်သည်။ ဤရွေ့ကား VAE TEAM EMIRATES, ASTANA PRO TEAM နှင့်နောက်ဆုံး MOVISTAR TEAM တို့ဖြစ်သည်။
ယခုအထူးပြု။ သူတို့ကဒီနှစ်သင်းနှစ်စုံကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနေပုံရတယ်၊ ဒါကစက်ဘီးတွေပေးနေတာပဲ။ ဒါကြောင့် BORA-HANSGROHE နဲ့ Quick-Step Floor များမှအသင်းများ။
ဒီလျှပ်စစ်မီတာအကြောင်းသိပ်မသိရပါဘူး နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးတချက်မှာကုမ္ပဏီများ, ဒါပေမယ့်သာပေါ်မှာအထူးအမှတ်တံဆိပ်တံဆိပ်နှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဘယ်လိုထွက်ရှာရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တွေရပါလိမ့်မယ်။
ယခင်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Mark Cavendish အသင်းသည် TEAM DIMENSION DATA ၏အသင်းဖြစ်သည်။ သင် Rotors 2IN တစ်ခုတည်းသောအသင်းဖြစ်သည်။ ပါဝါမီတာကိုအသုံးပြုသည်။
ယခုတွင်ရှေ့ဆောင် လုပ်၍ သင် Team SKY ၏စက်ဘီးပေါ်ရှိအဆင့်များနည်းတူ ၂၀၁၈ တွင် TEAM LOTTO NL-JUMBO ၏စက်ဘီးများပေါ်တွင်ဆက်နေမည်။ နောက်ဆုံးတော့ Quarq ဟာမြင်းစီးသူရဲတွေနဲ့နည်းပြတွေဆီကတုံ့ပြန်ချက်တွေကိုပေးဖို့ KATUSHA-ALPECIN အဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့ပေးသူဖြစ်တယ်။
ယခုငါသင်သည်ဤအနည်းငယ်သာရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းသည် 2018 ခုနှစ်အဘို့ကိုအသုံးပြုပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအတွက်ငါ့ကိုဤထုတ်ကုန်များ၏သင်အကြိုက်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်သိပါစေ။ သူတို့ကိုဖတ်ပြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဆက်အသွယ်လုပ်ချင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောဆောင်းပါးနှစ်ခုအတွက်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သောနည်းပညာအချို့အတွက်မည်သို့မည်ပုံဤတွင်တွေ့နိုင်ပြီး Peter Sagan ၏လိုလားသူဆိုင်ကယ်ကိုကြည့်ရှုပါ။
iantရာဝင်ငွေအားဖြင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစက်ဘီးထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီသည်စက်ဘီးကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နာမည်ဖြင့်ရောင်းချပြီးအဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ထုတ်လုပ်သည်ခြေကျင်ခရီး, Scott နှင့် Colnago ။
Cannondale ကုမ္ပဏီကြီးထက်သာ။ ကောင်း၏လား
Cannondaleနှိုင်းယှဉ်ပါကအဆင့်တိုင်းတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတောင်ကြီးစက်ဘီးများစုဆောင်းထားသည်.ရာ, ဒါပေမယ့်သင်က $ 5000 အောက်မှာအရည်အသွေးမြင့်ကာဗွန်အပြည့်အဝရပ်ဆိုင်းမှုကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာလျှင်.ရာတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုစလုံးသည်အရည်အသွေးနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုသူတို့တည်ဆောက်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် drivetrain အစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။
အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရသင်သည်ထိပ်ဆုံးကိုလိုချင်သည်လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ်မြင့်မားသောအကြောင်းကို (သို့မဟုတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မား)ကုန်းနှီးသင်သည်အားကစားမြင်းစီးသူရဲမဟုတ်လျှင်လျင်မြန်စွာစီးရန်ရှာဖွေသည်။ သင်၏တံတောင်ဆစ်၏နှာခေါင်းကိုထိပါကုန်းနှီးနှင့်ဆီသို့ ဦး တည်ရှေ့ဆက်ရောက်ရှိလက်ကိုင်တုတ်မင်းလက်နဲ့
ကျယ်ပြန့်သောကုန်းနှီးဖြစ်လေ့ရှိသည်ပိုပြီးအဆင်ပြေဒါကြောင့်အပိုအလေးချိန်ဘယ်မှာရှည်လျားသောစီးသို့မဟုတ်ဖြည်းဖြည်းစီးနင်းမြင်းစီးသူရဲအဘို့အကောင်းဖြစ်ကြသည်နောက်ထပ်ပစ္စည်းများပြanနာမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုပါးလာတယ်ကုန်းနှီးထိုကဲ့သို့သောဘယ်မှာပြိုင်ကားအဖြစ်တိုတောင်းအားထုတ်မှုများအတွက်ပိုကောင်းဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်နှစ်သိမ့်မှုလုံးဝနှင့်အတူထုတ်ပေးပေမယ့်အခြားအချက်များမျက်နှာသာအတွက်စိတ်မချရသောဖြစ်ပါတယ်။၂၉ ။ ၂၀၁၅
ကြီးမားတဲ့အလယ်ပိုင်းနေစဉ်ရပ်သွားသည်သွေးစီးဆင်းမှုကိုကူညီသော perineum onရိယာအပေါ်ဖိအားသက်သာစေရန်ကူညီပေးသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်အတွက်အထူးပါဝါဖြစ်ပါတယ်ကုန်းနှီးအပျော်တမ်းမြင်းစီးသူရဲနှင့်အထူးကမကထပြုကမ္ဘာ့ဖလားခရီးစဉ်သည်အလွန်ရေပန်းစားသည်အကောင်းအဆိုးတူညီတဲ့။
ခေါင်းပြွန်တို။ ပိုတိုသောခေါင်းဘောင်နှင့်အခြေခံအားဖြင့်ခေါင်း၏ပြွန်ထိပ်တွင်ထိုင်သည့်ပင်စည်သေးငယ်သည်။ကုန်းနှီးလက်ကိုင်တိုင်။ Pros များသည်ပုံမှန် joes များထက် frame ငယ်များကိုသာစီးလေ့ရှိသည်။
ဘယ်ဟာပိုကောင်းတဲ့ GT သို့မဟုတ် trek လဲ
TheGTအများကြီးရှိပါတယ်ပိုကောင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုနေစဉ်ခြေကျင်ခရီးတစ်ခုရှိလား။ ကျယ်ပြန့်သောဂီယာအမျိုးအစားများကို9drivetrain ။
Giant Pro ကဘယ်လိုကုန်းနှီးမျိုးကိုသုံးသလဲ။
Advanced SL0နှင့် Advanced SL 1 တို့ပါ ၀ င်ပြီး SLR Contact saddle ။ ၎င်းတွင်ကာဗွန်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာရထားများရှိသည်။ အလေးချိန် ၁၈၀ ဂရမ်ရှိသည်။ အဆင့်မြင့် SL2နှင့် TCR လိုင်း (0, 1 and 2) ရှိ Advanced Pro မော်ဒယ်များအားလုံးသည် SL Contact saddle နှင့်လာသည်။
အဆက်အသွယ် SLR သည်အဘယ်နည်း။
Team Sunweb မှ 2017 Giro d'Italia ချန်ပီယံ Tom Dumoulin အပါအ ၀ င် Giant pros ၏တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတစ်ခုဖြစ်သော SLR နှင့် Contact SL မော်ဒယ်များသည်မြင်းစီးသူရဲအိမ်သာ၏ထူးခြားသောအဆက်အသွယ်ထောင့်ကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်မှုသုံးမျိုး (Forward, Neutral သို့မဟုတ် Upright) တွင်ရနိုင်သည်။ စီးနေစဉ်။ '
အဆိုပါရာထူးမြင်းစီးသူရဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အများစုကကုန်းနှီးနှင့်အဆက်အသွယ်သို့ရောက်ရှိရာဖော်ပြရန်။ ရှေ့သို့အနေအထားရှိသည့်မြင်းစီးသူရဲသည်ကုန်းနှီးကိုအလယ်နှင့်နီးကပ်စွာဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောမြင်းစီးသူရဲသည်ကုန်းနှီး၏နောက်ဘက်နှင့်အဓိကအားဖြင့်ဆက်သွယ်သည်။ ကြားနေအကြား၌တည်ရှိ၏။ Giant တွင်သင်၏အဆက်အသွယ်imprရိယာ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ယူသောကုန်းနှီးတပ်ဆင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုရှိသည်။